तपाई कत्तीको भाग्यमानी ? भाग्यमानीले मात्र हेर्न सक्ने छन भिडियो भित्र साक्ष्यात शिव जी, जस्लाई हुने छ फलीफाप - Sudur Khabar
तपाई कत्तीको भाग्यमानी ? भाग्यमानीले मात्र हेर्न सक्ने छन भिडियो भित्र साक्ष्यात शिव जी, जस्लाई हुने छ फलीफाप
भगवान शिवको स्वरुपले अनेक अर्थ बोकेको छ । त्यसैगरी भगवान शिवले खरानी धस्ने गरेको धार्मिक कथन छ । खरानी, खासगरी लास जलाएर भस्म भइसकेपछिको अंश । अहिले पनि धेरै साधु सन्तले शरीरमा खरानी धस्छन् । किन होला त ? यो कुनै लहड होइन, आडम्बर पनि । यसभित्र दर्शन र विज्ञान दुबै छ । भष्म अर्थात खरानीलाई पवित्रताको प्रतिक मानिन्छ । अर्थात रिस, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध सबै नरहेको अवस्था नै खरानी हो । के पनि भनिन्छ भने खरानीमा ‘उर्जा-शरीर’ लाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने क्षमता हुन्छ ।
जब यसलाई शरीरमा लगाउँछौं, त्यसले अर्को संकेत गर्छ, आखिर जीवन नाश्वर छ । वा यो कुनै न कुनै दिन नष्ट हुन्छ । आर्युवेदमा पनि भष्म अर्थात खरानीको महत्व छ । यो एक प्राचिन उपचार विधी हो । यसले अनेक रोगबाट छुटकारा दिलाउने बताइन्छ । भगवान शिवको पूजामा भष्ममो खास महत्व हुन्छ । भनिन्छ, भगवान शिव मृत्युका स्वामी हुन् र उनी शव जलाइसकेपछि बाँकी रहेको खरानी आफ्नो शरीरमा धारण गर्छन् । यसको अर्थ यो हो कि, यस धर्तीमा जतिपनि जन्म हुन्छ, उसले एक न एक दिन धर्तिलाई छाडेर जानुपर्छ । भिडियो :-
रामारोशन गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्यो वर्षभरी गरेका काम
एक्लो भएको बेलामा वा अरु साथिलाई हर्टअट्याक भयो भने अपनाउनुहोस ५ सावधानी